အိမ်ရှင် လဲဖြစ် အလုပ်ရှင်လဲ ဖြစ် မွတ်ဆလင် ကုလား မိုးဝင်း ထံ အိုင်ရှည်ရွာသူ ကောင်မလေး မှ ပိုက်ဆံသွားတောင်ရာ ကောင်မလေးကို မိုးဝင်း ၏ အမျိုးသမီးမှ စတင် ပါးနားတို့ကို ရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိုးဝင်းမှ အိမ်ထဲ ဆွဲခေါ်လာခဲ့ ဟု ခိုင်းစေသဖြင့် အိမ်ထဲရောက်မှ တစ်မိသားစုလုံး ဝိုင်း နှိပ်စက်ကြသဖြင့်
ကောင်မလေး မခံမရပ်နိုင်ပဲ ကယ်တော်မူ ပါ အော်လို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ ရောက်ရှိလာပြီး ကောင်မလေးကို ခေါ်ထုတ်ကယ်တင်လိုက်ရတာပါ
ရေးသူ Unknown အချိန် 18:584comments:
အမျိုးအစာ Islam Virus, Islamic Jihad
ရွံ၊နွံ မစင်တွင်းမှာ လူးနေသော လူတစ်ယောက်ကို ဆယ်ယူပြီး ရေမိုးချိုး၊ သန့် စင်ပေး၊သန့် ရှင်းသော အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ပေးပြီး ထိုသူကို မစင်တွင်း ပြန်ခုန်ဆင်းမလားဟု မေးလျင် ဘယ်လို နေမလဲ. ..ပြန်ဆင်းပါ့မလား...
ထိုနည်းတူစွာ ကာမဂုဏ်ကိလေသာ မစင်တွင်းမှ လွတ်မြောက်သွားသော အရိယာ သူတော်စင်များဟာ ကာမဂုဏ်ခံစားမူများကို မစင်ကဲ့သို့ ရွံရှာပါတယ်။
ယောင်လို့ တောင် ပြန်လည်ခံစားသုံးဆောင်လိုစိတ် မရှိတော့ပါ။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ ၏ သူတော်စင် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဟာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ အသက်လေးဆယ်အရွယ် နစ်လင်သေ၊ မုဆိုးမ ခတီဂျာနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပါတယ်။အသက်လေးဆယ်မှာ တမန်တော်အဖြစ် ကျေညာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားမိတာက တမန်တော်ဘ၀ မရောက်ခင် အချိန်အထိ မုဟမ္မဒ်ဟာသာမာန် အိမ်ထောင် ရှင် ယောကျာင်္းတစ်ဦးပါပဲ၊ မိန်းမကိစ္စ ကင်းရှင်းသလိုစစ်တိုက်၊လုယက်၊ဓါးပြတိုက်၊ လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့် အစရှိသော ရာဇ၀တ်များမှလုံးဝကင်းစင်ပါတယ်၊ ကောင်းရောင်း၊ကောင်းဝယ် ကုန်သည်အလုပ်ဖြင့်
သား၊မယားကို ရှာကြွေးခဲ့သူ၊ လူပီသသောလူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရေးသူ Unknown အချိန် 01:19 11 comments:
အမျိုးအစာ Islam Virus, Islamic Jihad, Rohingya
ထိုင်းရဲများနှင့်ပူးပေါင်း၍ အစ္စလာမ်ကုလားမှ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို အနိုင်ကျင့် ယုတ်မားနေမှုများ
ဘန်ကောက်မြို့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၈၀ ခန့်အကွာတွင် ရှိသော မူစယ် အန်ဖေခေါင်ရွဲ၊ တန်ဘွန်စလဖန်၊ ဖစ်ဘူရီမြို့နယ် တွင်ရှိသော အလုပ်သမားတင်သွင်းသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပိုင် SARISA INTERNATIONAL EMPLOYMENT.CO.TH ကုမ္ပဏီ တွင် အချိန်အတန်ကြာ အလုပ် အကိုင်မရပဲ အခက်ကြုံ နေရသည့် မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ရာကျော် တို့အားMOEAF မှမွတ်ဆလင်ကုလား
ဖြစ်သူ ဦးကိုလေးဆိုသူမှ ဒုက္ခရောက်နေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများကို “မင်းမေစပက်”ဟု မိုက်ရိုင်းစွာဖြင့် ဆဲဆိုခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အစ္စလာမ်ကုလားမှ ဆဲဆိုခြင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအလုပ်သမားများမှ အစ္စလာမ်ကုလားမှ ယခုလို
ဆဲဆိုခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ဒေါသဖြစ်ကြသော်လည် ၎င်းသည် ထိုင်းရဲများနှင့်ပနာသင့်နေခြင်းနှင့် တိုင်းတစ်ပါးမှာ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မိမိတို့ဒေါသကို ထိန်းချုပ်၍ နေခဲ့ရသည်ဟု သိရပါသည်။
ရေးသူ Unknown အချိန် 11:024comments:
အမျိုးအစာ Islam Virus, Islamic Jihad, ဗွီဒီယိုသတင်း
NLD မှာ ကိုနီသာ အခရာလား?
- ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူးလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောထားတယ်။
(ထားပါတော့။ သမ္မတက ဦးသိန်းစိန်၊ NLD ပြိုင်ဘက်ပါတီ အကြီးအကဲမို့ မလေးစားလို့။)
- NLD နာယက ဦးတင်ဦးလည်း ပြောထားတယ်။
- NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းကလည်း ပါတီသဘောထားကို ပြောထားတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး။
-ဒီလိုအခြေအနေမှာမှ ကိုနီက ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းစဉ်တပ်လာတယ်။ NLD က လူတွေက ကိုနီကို ပြောတာကို ခံပြင်းကြတယ်။
ရေးသူ Unknown အချိန် 03:12 22 comments:
အမျိုးအစာ Islam Virus, NLD
ကိုယ်နဲ့ အမျိုးမတူ ဇာတ်မတူဆိုသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းမိပါက
ကိုယ်နဲ့ အမျိုးမတူ ဇာတ်မတူဆိုသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းမိပါက အကောင်းဆိုတာ မျိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘဲ အဆိုးနှင့်သာ အဆုံးသတ်ရမည်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသည့် တရားတော်
ရှေးသရောအခါ ဗာရာဏသီပြည် ဗြဟ္မဒတ်မင်း လက်ထက်၌ ဘုရားလောင်းသည် တောတွင်းဝယ် ကြွက်မင်းမျိုး၌ ဖြစ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပမာဏမှာ ၀က်ငယ်ပမာဏ ရှိ၏။ အခြွေအရံကြွက်များမှာ ရာပေါင်းများစွာ ရှိလေသည်။
တနေ့သ၌ မြေခွေးတစ်ကောင်သည် အစာရှာစဉ် ဘုရားလောင်းကြွက်နှင့် ကြွက်အပေါင်းကို တွေ့မြင်သွား၏။ ထို့နောက် ကြွက်အပေါင်းကို လှည့်စား၍ ငါစားအံ့-ဟူသောအကြံဖြင့် ကြွက်တို့၏ အနီး၌ နေမင်းသို့မျက်နှာမူကာ ပါးစပ်ကိုဟလျက် ခြေတချောင်းဖြင့်သာ ရပ်နေ၏။
ရေးသူ Unknown အချိန် 02:575comments:
မျိုးချစ်စိတ် ဆိုသည် မိမိ တိုင်းပြည်နှင့် မိမိ လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးသော ''စိတ်'' ကို ရည်ညွှန်း ပါသည်။ မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူများသည် ''အမျိုးစစ်''မှ အမျိုးချစ်တတ် ကြပါမည်။ ''အမျိုးမစစ်''က အမျိုး ချစ်တတ်မည် မဟုတ်ပါ။ ''အမျိုးစစ်ခြင်း အကြောင်း အရင်းကို လေ့လာပါလျှင်-
၁။ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ထိန်း မြှင့်တင်ခြင်း၊
၂။ မိမိစာပေ၊ အနုပညာ ရိုးရာ ဓလေ့ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၃။ မိမိ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့် အတန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်း ဟူသော ''အမျိုးစောင့် တရား (၃)ပါး'' ကို စောင့်တည်ကျင့်ကြံ နိုင်သူမှ ''အမျိုးစစ်'' သူဟု သတ်မှတ် ရပါမည်။
အမျိုးစစ်၍ အမျိုး ချစ်သူတိုင်းမှာ ဇာတိမာန်နှင့် ယှဉ်သော ''စစ်မှန်သော မျိုးချစ်စိတ်'' ရှိကြ ပါသည်။
ရေးသူ Unknown အချိန် 02:554comments:
အမျိုးအစာ ၉၆၉ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှာမှု
ဂုဏ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေလည်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဂုဏ်တွေဟာ ဂုဏ်တကာ့ ဂုဏ်တွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်မှာ ဒီဂုဏ်ကိုမှ လေစာမှု လိုက်နာမှု ကျင့်သုံးမှု မရှိဘူးဆိုရင် မိဘဆွေမျိုး ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းကို ခံရတတ်လို့ပါပဲ။
ဒီအမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်တင် သက်ဆိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။
လူသားမျိုးနွယ်တစ်စုဆိုရင် အဲသည်လူမျိုးစုထဲမှာပါတဲ့ လူတွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ-ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သလိုပါပဲ။
ရေးသူ Unknown အချိန် 02:54 1 comment:
အစ္စလာမ်ကုလားပိုင်မေ၀င့်ကုမ္ပဏီ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါ် ယုတ်မားမှုများ
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအလုပ်သမား၄၀၀ဆီက တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သုံးသိန်းခွဲစီ (ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကျော် )ယူပြီး ထိုင်းကိုမပို့ပဲထားတဲ့ အစ္စလာမ်ကုလားပိုင်မေ၀င့်ကုမ္ပဏီ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါ် ယုတ်မားမှုများ
ရေးသူ Unknown အချိန် 18:56 1 comment:
Blog Archive September (3) August (6) July (3) May (29) April (86) March (21) February (5) November (6) October (28) September (11) August (43) July (76) June (149) May (257) April (467) March (180) February (83) January (103) December (102) November (39) October (20)
မန္တလေးမြို့ ၃၄ ၃၅ကြား ၈၃ ၈၄ကြား အပ်ချုပ်ဝင်းအတွင်းရှိဗလီမှ ကျည်ကာအင်္ကျီများနှင့် လက်နက်များ ရှာတွေ့သောကြောင့် ယခုအမှတ်၈စခန်းသို့ရောက်ရှိနေ...
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ချင်နေတာ ၅၉(စ) တစ်ခု တည်း အတွက်ဟုယူဆနေသော အမျိုးသားရေးသမားတွေ ထင်မထားမိသော အခြားအကြောင်းအရာများ
အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၂) အခြေခံသပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းမှ ပုဒ်မ ၄၃၆ အား ပြင်ဆင်သင့်သည် မှာမှန်က န်သော်လ ည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စား ၇၀% (သို့မဟုတ်) ၇၅% ...
KIA ပထွေး အရွေးမှားပြီလား
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရာမှာ အစိုးရ,တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပဲ မြင်နေလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အရေး...
မန္တလေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့စာပေဟောပြောပွဲ လုပ်မယ်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေး ပုဒ်မ ၅၉ ထောက်ခံပွဲ လုပ်ပြီး ရက်ပိုင်းလေးမှာပါ။လူတွေလ...
ခုနှစ်အလိုက် သီဟသူရဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူများ
၁၉၄၉ ခုနှစ် ၀၁။ ကြည်း ၃၆၂၃ ဒု-ဗိုလ်ကိုကြီး (ကျဆုံး)၊ တွဲဘက်ခရိုင်ရဲဗိုလ်မှူး၊ သံတွဲ ၁၉၅၀ ခုနှစ် ၀၁။ ကြည်း ၃၅၇၀ ဗိုလ်ကြီးလှမော်...
မောင်ငယ်ရင်သွေး နာဘိသေးလော့ ၊ ရှေးသရောအခါ ပြည်ဗာရာဝယ် ကုဋေကြွယ်သား သူဋ္ဌေးအားလျှင် ၊ သားတစ်ယောက်ဖြစ် ချစ်၍တစေ အိမ်မှာနေ၍ စာပေမကျ မိဘစုေ...
"လက်ဖြောက် တောင် မတွတ်ချင်တော့ပါဘူး အမေ"
အမေ...ခံစားချက်တွေ မသိမ်းနိုင်လို့ သားတစ်ယောက် ဖွင့်အန်ပါရစေ အမေ။ ၈၈၈၈ နဲ့အတူ စင်ပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေ စင်ပေါ်က အမေပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သားတို့ ...
မွေးသမိခင်ကျေးဇူးအမေကို ပြန်လိုးတာ အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ မူဆလင်တွေ
သေသေချာကြည့် ထား ခွေးသားတွေ။ အဲဒါ မင်းတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စ်ဆလင်ခွေး သားတွေ ကိုယ့်အမေကိုယ်ပြန် လိုးရင်း လူမိသွားလို့ ခေါ်ပြီး အင်တာကို...